कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बाँके र पर्सामा एक–एक जनाको मृत्यु - Yessamachar
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बाँके र पर्सामा एक–एक जनाको मृत्यु
९ असोज, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बाँके र पर्सामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत ५२ वर्षीय पुरुषको आज बिहान र पर्साको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचाररत ७७ वर्षीय पुरुषको गएराति मृत्यु भएको हो ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ एक्लैनी निवासी ५२ वर्षीय पुरुष श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि असोज ६ गते राति ११ बजे कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठका अनुसार ६ गते नै उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको दुवैतिरको फोक्सोमा निमोनिया र उच्च रक्तचापको समस्या थियो ।
रोगको प्रकृतिअनुसार गरिनुपर्ने सबै प्रकारको उपचार गर्दागर्दै ती पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत एवं कोरोना स्रोत व्यक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । योसँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको छ ।
यसैगरी पर्साको वीरगञ्जमा पनि एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । पर्साको पोखरिया नगरपालिका–१ का ७७ वर्षीय पुरुषको नेशनल मेडिकल कलेज अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिहीबार राति साढे ८ बजे मृत्यु भएको हो । योसँगै पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्य हुनेको संख्या ४५ पुगेको छ ।
मुटु र मिर्गौलाको समस्याबाट पीडित ती पुरुषलाई असोज ७ गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । नारायणीमा गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेशनल मेडिकल कलेज अस्थायी कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा पनि बचाउन नसकिएको अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर असरफ हुसैनले जानकारी दिए ।
‘नारायणीबाट पठाउँदा नै शरीरमा अक्सिजन मेन्टेन हुन सकेको थिएन, मुटु सुन्निएको थियो, ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल भइरहेको थिएन,’ डा. हुसैनले भने ‘भेन्टिलेटरको सपोर्टमा राखेर आवश्यक औषधीहरु चलायौं, तर पनि बचाउन सकिएन ।’ उनको कलेजोमा समेत समस्या देखिएको डाक्टर हुसैनको भनाइ छ ।
Previous articleअभिलेखीकरणका लागि घरदैलोमा शिक्षक
Next articleकुकुरले सुँघेरै पत्ता लगाउँछ कोरोना संक्रमण !
संयमता अपनाउन संयुक्त राष्ट्रंघको आग्रह
Yessamachar - मंसिर १३, २०७७ 0
एएनआई । संयुक्त राष्ट्रसंघले मध्यपूर्वमा संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । इरानका एकजना वैज्ञानिकको हत्या भएपछि संयुक्त राष्ट्रंघले सो आग्रह गरेको हो । ती...
६७३१ जनामा परीक्षण गर्दा १४४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Yessamachar - मंसिर ३, २०७७ 0
३ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १४४२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६७३१ जनामा...
व्यतित बिमालेखको विलम्ब शुल्कमा शत्‌प्रतिशत छुट
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफले व्यतित बिमालेखको विलम्ब शुल्कमा शत्‌प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ । आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसर तथा कोभिड १९ को परिस्थितिले समस्त अर्थतन्त्र...